RASMI: Barcelona v Real Madrid- Isku Aadka Semi-finalka Copa Del Rey Oo La Sameeyay Iyo Laba Kulan Oo El Clasico Oo Afar Maalmood Gudahood Lagu Ciyaari Doono - Latest football news
RASMI: Barcelona v Real Madrid- Isku Aadka Semi-finalka Copa Del Rey Oo La Sameeyay Iyo Laba Kulan Oo El Clasico Oo Afar Maalmood Gudahood Lagu Ciyaari Doono
Isku aadka afar dhamaadka koobka boqorka Spain ee Copa Del Rey ayaa hadda la sameeyay waxaana ka soo baxay kulan El Clasico ah iyada oo Real Madrid iyo Barcelona ay isku fara saari doonaan wareega afar dhamaadka Copa Del Rey ee xili ciyaareedkan waxayna tani suurtogal ka dhigtay in afar maalmood gudahood la ciyaari doono laba kulan oo El Clasico ah.
Real Madrid iyo Barcelon aayaa markii 20 aad iskaga hor iman doona tartanka Copa Del Rey ee kulamada aan finalka ahayn iyada oo Real Madrid 10 jeer soo dhaaftay Barcelona halka Barcelona ay 9 jeer dhinac iskaga dhigtay Real Madrid marka laga saaro kulamadii finalka ahaa ee ay tartankan iskaga horyimaadeen oo 7 jeer ahaa.
Guud ahaan isku aadyada Copa Del Rey ayaa soo saaray 33 kulan El Clasico oo ay Barcelona iyo Real Madrid iskaga hor yimaadeen iyada oo guud ahaan Real Madrid soo guulaysatay 12 kulan halka Barcelona ay soo guulaystay 14 kulan halka 7 kulan ay barbaro ku soo dhamaadeen.
Real Madrid ayaa Barcelona tartanka Copa Del Rey kaga soo dhalisay 64 gool halka Barcelona ay 63 gool ku gaadhay shabaqa Real Madrid, waxaana muuqata sida ay labada kooxood aad ugu iskugu dhaw yihiin gool dhaintii ay ka soo sameeyeen 33 kii kulan ee Copa Del Rey iskaga hor yimaadeen.
Markii ugu danbaysay ee ay Real Madrid iyo Barcelona iskaga horyimaadeen koobka Copa Del Rey waxay ahayd sanadkii 2014 kii markaas oo ay labada kooxood iska hor yimaadeen finalkii graoonka Valencia ee Mestallas Stadium waana dhacdada ugu caansani halkii ay ka dhacday ee uu Gareth Bale orodkii waalida ahaa ku dhaafay difaacii Barca ee Bartra.
Kooxaha Valencia iyo Real Betis ayaa ka badbaaday in ay ku aadaan Barcelona iyo Real Madrid iyada oo waliba kooxda Real Betis haysata fursada ay ugu soo bixi karto finalka sanadkan garoonka kooxdeedu marti galin doono.
Isku aadka Afar Dhamaadka Copa Del Rey Oo Dhamaystiran